COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 06 JONA 2021 - ewa.mg
COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 06 JONA 2021
News - Santé - COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 06 JONA 2021
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 06 JONA 2021 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
Isan’ny nanaovana fitiliana: 327
Tranga vaovao: 52
11 Haute Matsiatra
6 Amoron’i Mania
1 Atsimo Andrefana
Tranga misy fahasarotana: 123
Namoy ny ainy: 05
L’article COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 06 JONA 2021 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
« Crédit carbone »: vonjen’ny Banky iraisam-pirenena ny ala
Nifanaraka amin’ny governemanta ny Banky iraisam-pirenena hanome « crédit carbone », izany hoe, hividy ny asan’ny ala eto amintsika mbola afaka misintona « carbone » mandoto ny tontolo iainana sy miteraka hafanana. Nilaza ny fanjakana fa nahavita dingana betsaka i Madagasikara, anisan’ireo firenena afrikanina efatra aty Afrika. Satria hoe mbola manana ala betsaka any amin’ny kaominina 177, anatin’ny faritra dimy: Analanjirofo, Atsinanana, i Sava, i Sofia, Alaotra Mangoro.Ny fifanarahana eran-tany tany Kyoto, Japana 1997, sy tany Paris, Frantsa 2015, atao izay hampidinana ny hafanana ho 2°C eto ambonin’ny tany raha ampitahana mialoha ny vanim-potoana indostrialy 1 750. Koa ny « crédit carbone » ho an’izay firenena afaka misintona “carbone” betsaka, satria be ala ao aminy. Nahazo io “crédit carbone” io ny eto Madagasikara, vonjen’ny Banky iraisam-pirenena, noho ny ala efa ho ripaka. Araka ny tatitry ny WWF, ny janoary 2021, faritra mena izao eto Madagasikara, anisan’ny 24 maneran-tany ahitana fahapotehan’ny ala be indrindra (Taratra, 3 febroary 2021 “Ala potika”).Vola hampandrosoana ny kaomininaNanazava ny ao amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana fa hoentina hampandrosoana ny kaominina misy ireo faritra arovana sy ala, ny vola azo, hamerenana ny fambolen-kazo. Hisitrika voalohany izany, raha tsy misy ny fiovana, ny mponina manao ny asa any amin’ireo kaominina. Tokony hahita fidiram-bola hafa izany ireo mponina ireo hampihena na hampitsahatra mihitsy ny fahapotehan’ny ala. Raha tsy misy fiovana izay fari-piainan’ny mponina izay nofinofy ny hoe ala voaaro. Tsiahivina fa noho izany no niteraka fifandonana tany Besakay, Ambatondrazaka, nahafaty zandary iray sy sivily roa. R.MathieuL’article « Crédit carbone »: vonjen’ny Banky iraisam-pirenena ny ala a été récupéré chez Newsmada.
Tan-tsoroka ao anaty hamehana :: Sokajin’olona hafa hahazo 100 000 ariary mandritra ny roa volana
Nanome fanampiana dimy tapitrisa dôlara (manodidina ny 19 000 tapitrisa ariary) ho an’i Madagasikara ny fanjakana amerikana, amin’ny alalan’ny Fandaharanasa amerikana momba ny fampandrosoana (USAID). Hoentina hamahana olana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ateraky ny valanaretina Covid-19 izany. Ankohonana 323 000 eto Antananarivo, Fianarantsoa, Moramanga, Taolagnaro, Toamasina ary Manakara, izay tsy mbola nahazo Tosika Fameno mihitsy, no hisitraka ny fanampiana. Ny Fandaharanasa momba ny fanjarian-tsakafo (PAM) no hitantana ny fitsinjarana izany. Hahazo vola iray hetsy ariary isam-bolana, mandritra ny roa volana, ireo tokantrano hisitraka ny fanampiana ka ho laharam-pahamehana amin’izany ireo ankohonana ahitana olona sembana, ankizy, na beantitra, na olona miasa amin’ny sehatra tsy manara-dalàna. Fantatra fa hahazo hafatra fohy amin’ny finday ireo tokantrano voafantina hisitraka ny fanampiana. Ho hita ao anatin’io hafatra fohy io ny kaody Western Union, ny toerana misy ny banky ary ny daty hakana ny vola, araka ny fanampim-panazavana hatrany. L’article Tan-tsoroka ao anaty hamehana :: Sokajin’olona hafa hahazo 100 000 ariary mandritra ny roa volana est apparu en premier sur AoRaha.
Lalaon-tsaina « Echec » :: Malagasy roa ambin’ny folo mianadahy hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena
Mikarakara fifaninanana lehibe an-tambajotran-tserasera, hifanandrinana firenena telo amby enimpolo amby zato, eo amin’ny taranja « Echecs » ny Federasiona iraisampirenena na Fide, amin’ny 22 hatramin’ny 30 aogositra 2020. Hanana solontena roa ambin’ny folo mianadahy amin’io sehatra avo lenta io i Madagasikara. Ramalanjaona Andrianantenaina no kapiteny mpitarika ny ekipam-pirenena malagasy, ahitana an-dRakotomaharo Fy sy Ranaivoharisoa Alain eo amin’ny sokajy lehilahy. Hisolo tena ny andriambavilanitra Ravelomanana Sabine sy Razafindrabiaza Christine ary Raharimanana Faratiana. Ireo mpilalao efa zatra fifaninanana lehibe kosa no nosafidian’ny Federasiona malagasy ho an’ny sokajy latsaky ny roapolo taona (U20), toa an-dRazanadrakotoarisoa Toavina, Ramarolafy Gloria Grace, Nomenjanahary Fanilo ary Randriamaharo Mitia. Tsy tafiditra tao anaty lisitra kosa Ralison Harifidy, malagasy nahazo ny anaram-boninahitra « Maître international » farany sady tompondakan’i Afrika sokajy U16, tamin’ny taona 2017. Tsinjaraina diviziona efatra, araka ny filaharana maneran-tany, ireo ekipam-pirenena mandritra ny fifaninanana. Ao amin’ny diviziona fahatelo no misy ny ekipa malagasy miaraka amina firenena telo amby telopolo hafa. L’article Lalaon-tsaina « Echec » :: Malagasy roa ambin’ny folo mianadahy hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena est apparu en premier sur AoRaha.
Fiatrehana ny maitso ahitra: manahy ny ho avin’ny tantsaha ny Harena
Tsy afaka ny hangina. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny antoko Harena, ny herinandro teo. Lohatenin’izany : « Mandry tapa-kibo ny tantsaha ». Nambaran’ny filohany, i Lezava Fleury tamin’izany fa ho sarotra ho an’ny fanjakana ny hiatrehana izao fotoan’ny maitso ahitra izao. Nitondra sosokevitra izy ireo ka anisan’izany ny fanomezana sakafo mitondra hery ho an’ireo faritra tsy nisian’ny orana, tahaka ny any atsimo. Eo koa ny famadihana ho « Cantine scolaire » ny vola ividianana kitapo sandrify ho an’ny mpianatra. « Hampitomboina ny vary hafarana ary horaisin’ny fanjakana an-tanana ny fitsinjarana izany. Hanokanana vola ireo tantsaha ka atao ambany ny tahan’ny zanabola hahafahan’izy ireo mampiroborobo ny fihariana ataony : fambolena, fiompiana, asa tanana… », hoy ny Harena.Nialohavan’ny fanadihadiana nataon’izy ireo izany tamin’ny fahitana fa miakatra hatrany ny vidim-bary. Mitotongana ny vidin’ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny voly fanondrana. « Tsy ny any atismo irery intsony no tratry ny hanohanana…Ho lava ny maitso ahitra nefa ny vary aloha, ahina noho ny tsy fisian’ny orana… Mandry tapa-kibo ny tantsaha nefa tsy misy soritrasa manangasanga », hoy izy.Synèse R.L’article Fiatrehana ny maitso ahitra: manahy ny ho avin’ny tantsaha ny Harena a été récupéré chez Newsmada.
Kick boxing – Ady fitsapana: namiratra ny ligin’ny Vatovavy Fitovinany
Tontosa ny alahady 5 mey lasa teo, tany Manakara, ny andiany fahatelo amin’ny ady hifantenana ny handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy, taranja kick boxing. Fifanandrinana miisa 11 no nitranga nandritra izany. Nisongadina ny ligin’ny Vatovavy Fitovavy, izay nahazo fandresena miisa 5, laharana faharoa kosa ny ligin’AnalamangaTsiahivina, efa nisy ny ady natao tany Antsirabe, ny faran’ny volana febroary lasa teo, tany Toamasina kosa ny andiany faharoa no natao ny faha-31 marsa. Eo am-piandrasana ny lisitra farany, mirakira ny anaran’ireo ho ao anatin’ny ekipam-pirenena, toy izao ny vokatra, ny alahady teo: Lehilahy: Low kick: -51 kg: Figo (Atsinanana) nanilika an’i Rosalde (Atsimo Andrefana)/Marcoss (Vatovavy Fitovinany) nandresy an’i Vaza (Atsimo Andrefana), 54 kg: Tolotra (Vatovavy Fitovinany) nandavo an’i Toky (Analamanga), 57 kg: Jean Claude (Analamanga) nanilika an’i Francky (Alaotra Mangoro), 60 kg: Black (Matsiatra Ambony) nandresy an’i Joseph (Vatovavy Fitovinany)/Dico (Vatovavy Fitovinany) nandavo an’i Alain (Vakinankaratra), 63.5 kg: Rado (Vatovavy Fitovinany) nanilika an’i Christian (Atsimo Atsinanana)/Joel (Vatovavy Fitovinany) nandresy an’i Zakasoa (Analamanga)/Jessy (Analamanga) nandavo an’i Beloha (Analamanga)/ K1 Rules: Mathieu (Atsinanana) nanilika an’i Sitraka (Analamanga)/ Vehivavy: 52 kg: Natacha (Analamanga) nandresy an’i Fitiavana (Matsiatra Ambony)/ Sandra (Vakinankaratra) nandavo an’i Judie (Analamanga). Mi.Raz L’article Kick boxing – Ady fitsapana: namiratra ny ligin’ny Vatovavy Fitovinany a été récupéré chez Newsmada.
Volley-Afrika U19: handray ny fifaninanana i Madagasikara
Araka ny fampitam-baovao, nankatoavin’ny Kaonfederasiona afrikanina ny volley ball (CAVB) ny fandraisan’i Madagasikara ny fiadiana ny tompondaka ny firenena afrikanina 2020, ho an’ny sokajy latsaky ny 19 taona lehilahy. Fifaninanana hotanterahina eto Antananarivo, ny 20 hatramin’ny 28 febroary ho avy izao, raha ny tapaka teo anivon’ny CAVB, ny fiandohan’ity herinandro ity. Tsiahivina fa isan’ireo lalao nahemotra vokatry ny fihanaky ny Covid-19 tamin’ny taon-dasa ity fifaninanana ka izao hotanterahina eto Madagasikara izao, afaka iray volana. Hatreto, i Kameronina, ny RD Congo, i Tonizia ary isika mpampiantrano ny efa nilaza fa handray anjara. Raha ny fantatra, hisolo tena an’i Afrika amin’ny “World Championships” ho an’ny taona 2021 izay firenena misalotra ny anaram-boninahitra amin’ity fiadiana ny tompondakan’ny firenena afrikaninana U19 lehilahy, hatao eto amintsika, ity. Manana tombony lehibe ny handrombaka io tapakila io, araka izany, i Madagasikara, amin’ny maha mpampiantrano azy. Ankoatra ny fampiantranoana ity fifaninanana afrikanina ity, mbola andrasana ihany koa ny mety handraisan’i Madagasikara ny “CCCZone 7” amin’izao taom-pikatrohana 2021 izao. Tsiahivina fa teto amintsika ny nanaovana ny andiany farany tamin’ity fifaninanana ity, nahafapo ny delegasiona vahiny sy ny CAVB ka mbola manana vintana handray izany indray isika amin’ity.Raha hiverenana ny fandaharam-potoana amin’ity fiadiana ny tompondaka ny firenena afrikanina, tanterahina eto Madagasikara ity, ny 20 febroary ny higadona eto an-toerana ireo vahiny handray anjara. Hatao ny 21 febroary kosa fivoriana ara-teknika ary hanomboka ny 22 febroary kosa ny fifaninanana. Tsara ny manamarika fa efa fantatra avokoa ny fandaharam-potoana rehetra sy ny firenena mandray ny fifaninanana afrikanina hafa. Fandaharam-potoana izay feno dia feno tokoa raha ny hita anaty tetiandro 2021 ny CAVB. Mi.RazL’article Volley-Afrika U19: handray ny fifaninanana i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Fanamby amin’ny fitantanana :: Hanova an’Antananarivo ao anatin’ ny enim-bolana ny Ben’ny tanàna
Nafana ny tafatafa nifanaovan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, Naina Andriantsitohaina, niaraka tamin’ireo mpanao gazety tetsy amin’ny Studio an’ny vondrona fahitalavitra RTA tetsy Ankorondrano, omaly. Fotoana nanamafisan’ny Ben’ny tanàna ny fahasahiana hitondra ny fanovana mendrika ny renivohitra ary nanaovany fanamby amin’ny fahatsapana ny fiovana ao anatin’ny enimbolana monja. Naverimberiny matetika ny fifotoran’ny baiko sy ny asa aman-draharaha hataon’ ny ekipany araka izay fampanantenana nataony tamin’ ny mponin’Antananarivo renivohitra amin’ny alalan’ilay fandaharanasa « veliranon’ Iarivo ». Tsy hanavaka amin’ny fampiharana ny fitsipika sy ny lalàna ho famerenana ny hasin’Antananarivo ny lehilahy. « Tsy maintsy manaraka fitsipika isika rehetra. Tsy tokony hoentina eto andrenivohitra intsony ny fomba fiainana avy any ambanivohitra. Izay tsy afaka hanaraka ny satan’ Antananarivo renivohitra dia tsofina rano hitady tanàna hafa honenana », hoy mihitsy ny Ben’ny tanàna. Isan’ny fepetra hihatra tsikelikely eto Antananarivo renivohitra ny andalana rehetra ao amin’ilay boky kely mirakitra ny fikoloampahasalamana sy filaminana, na eo aza ny resabe sy fanabarabarana miely any amin’ ny tambazotran-tserasera. Zon’ny mponina tsy ankanavaka ny mitaraina noho ny loto sy ny fikorontanana eny amin’ny fiaraha-monina eto an-drenivohitra. « Tanjona ny fametrahana ny fifanajana eny amin’ny fiaraha-monina. Tsy ny lamandy no hampidi-bola ho an’ny kaominina. Betsaka ireo mbola tsy mahalala an’ireo fitsipika ireo, ka hisy ny fanentanana hatao », araka ny fanamafisana nataon’i Naina Andriantsitohaina. Na eo aza ny fanenjehana an’ireo mpandoto sy mpanakorontana dia tsy latsa-danja ny fepetra fanatsarana ombam-panorenana an’ireo fotodrafitrasa sosialy izay mifaningotra amin’ny fiainan’ny mponina andavanandro. Tsy mandeha ila Nosinganin’ny Ben’ny tanàna ny fanamboarana toeram-pivoahana vaovao sy ny fametrahana dabam-pako maro. An-dalana ireo asa ireo, araka ny fampahafantarana nataony tetsy amin’ny Studio an’ny RTA, omaly. Isan’izany ny fananganana trano fonenana ho an’ireo sahirana, ny fividianana fitaovana hiasan’ny kaominina amin’ny fanamboarana lalana, ny fanamboarana tsena, ny fanorenana toerana fialam-boly hanatsarana ny endrik’Iarivo sy ny hafa… « Efa mandeha avokoa ny antso tolo-bidy momba an’ireo, miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka samihafa. Na izany aza, hoy i Naina Andriantsitohaina, dia hiezaka hatrany ny kaominina hampitombo ny fidirambolany ». Nahazo fampitandremana manokana , tetsy andaniny, ireo mpihoa-pefy amin’ireo mpiara-miasa aminy, indrindra fa ireo mpanao kolikoly. L’article Fanamby amin’ny fitantanana :: Hanova an’Antananarivo ao anatin’ ny enim-bolana ny Ben’ny tanàna est apparu en premier sur AoRaha.
Big Mj – Jaos’PubMpihira manana ny maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny vazo malagasy i Big MJ, indrindra ny mozika mafana. Hitondra ny “Manala vita bacc” ao amin’ny Jaos’Pub Ambohipo ny lehilahy, anio zoma hariva 23 oktobra. Lohahevitry ny seho ny “Nuit blanche”.Bigy Bandy – Piment CaféHitondra ny “Kalaza Night” etsy amin’ny Piment Café ny Bigy Bandy, rahampitso asabotsy 24 oktobra 2020, manomboka amin’ny 5 ora hariva. Fiaraha-miasa amin’ny Ray Event Creators-Rec izy ity. Hovazoina ao avokoa ireo hira avy eto an-toerana sy ny vahiny manana ny hanitra ho azy eo amin’ny tontolon’ny mozika. Mpanao mozika efatra manana ny maha izy azy izy ireo.Arohim – Lapa RN7 Soanierana“Mozik’hehy” ny hoentin-dry Arohim etsy amin’ny Lapa RN7 Soanierana, rahampitso 24 oktobra manomboka amin’ny 4 ora hariva. Seho miresaka “pour” ou “contre” ny lohahevitra amin’izany. Fantatra fa natao ho an’ny olona mihoatra ny 18 taona no ho miakatra izy ity. Anisan’ny hanafana izany i Faniry Fitiavana, ankoatra ny “animation DJ”.Atounah – Facebook sy You TubeMivoaka, anio zoma 23 oktobra 2020, ny rindrantsary “clip” “Mahaiza mifoha” an’i Atounah, mivoy ny gadona Rap. Hira miresaka ny tontolo manodidina sy ny fiarahamonina izany. Efa niangaliana fatratra ny pitsompitsony rehefa mialoha ny namoahana azy io, ary efa azon’ny rehetra ankafizina amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera “facebook” sy “you tube” izany.Valiha Académie – Hiditra amin’ny dingana lalindalina kokoaTontosa ny fampitam-pahalalana ho an’ireo hampianatra momba ny valiha sy ny tontolony, eo anivon’ny foibe fikarohana sy fampianarana Valiha Académie. Efa nirosohan’ireto mpianatra ho mpampianatra ireto ihany koa ny fizarana asa. Manomboka rahampitso, hiditra amin’ny dingan’ny fanehoana ny fikarohany manokana eo anatrehan’ny mpianatra izy ireo. Ankoatra ny asa niombonana, nomena safidy malalaka ireto mpiofana ho mpampianatra ireto ny amin’ny lohahevitry ny fikarohana nataony.Nangonin’i Narilala sy HaRy Razafindrakoto L’article Taratry ny kanto a été récupéré chez Newsmada.
Lapan’Anosikely :: Anio vao handinika ny lalànan’ny fanoherana ireo loholona
Hazakazaka arahin-tosika. Feno dia feno ny fandaharam-potoanan’ireo loholona anio. Taorian’ny nandanian’ny solombavambahoaka enina amby valopolo an’ilay tolo-dalàna mifehy ny mpanohitra sy ny fanoherana, afak’omaly, dia niroso tamin’ny fakan-kevitra tamin’ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ry zareo senatera. Andrasana anio ny tsangan-tanana ho fandaniana na tsia an’izany tolo-dalàna izany, satria tsy vita omaly ny asam-baomiera tetsy amin’ny lapan’Anosikely. « Tsy tonga tety an-toerana ireo tompon-kevitra amin’ilay tolo-dalàna, ka tsy tanteraka ny asam-baomiera », hoy ny loharanom-baovao avy eny amin’ny Antenimierandoholona. Anio avokoa izany vao hiatrika ny asam-baomiera sy ny fivoriambe azon’ny rehetra atrehina, ny etsy Anosy. Tapitra anio ireo roa ambin’ny folo andro noferan’ny Lalàm-panorenana hiatrehana ny fivoriana tsy ara-potoana. Raha misy fanovàna entin’ny Antenimierandoholona anefa amin’ilay tolo-dalàna efa lany teny Tsimbazaza, dia tsy maintsy miverina mivory indray ireo depiote mandinika ilay rijan-teny. Araka izany, niangavy an’ireo depiote ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine mba hiandry ny fiafaran’ity fotoam-pivoriana tsy ara-potoana ity mandra-pahalany tanteraka an’io tolo-dalàna io. Mety hiasa alina, araka izany, ireo solombavambahoaka izay tompon’ny teny farany. Aorian’izay vao hofaranana tanteraka ny fotoam-pivoriana. L’article Lapan’Anosikely :: Anio vao handinika ny lalànan’ny fanoherana ireo loholona est apparu en premier sur AoRaha.
“Grand Tana”: hofanina hitantana fotodrafitrasa ireo eny ifotony
“Tafiditra amin’ny tetikasa “Lalankely III” izao, iarahana amin’ireo mpisitraka eny ifotony ho amin’ny fahaiza-mitantana ny fotodrafitrasa mba haharitra sy ho voakojakoja”, hoy ny tale jeneralin’ny Fanajariana ny tany, Rabe Harimanana. Natao tetsy Anosy, omaly, ny fifanaovan-tsonia eo amin’ny minisitera (MATP) sy ny Ivontoeram-pirenena ho an’ny fampandrosoana eny ifotony (INDDL). Miofana amin’izany ny ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsaina.Ialohavan’ny fidinana ifotony izany hihainoana ny hetahetan’izy ireo amin’ny fomba fitantanana. Anisan’izany ny lalana, ny paomy, ny toeram-pidiovana, araka ny nambaran’ny talen’ny INDDL, i Said Ahamad Jaffar.Anisan’ny hisitraka izany ny eo anivon’ny “Grand Tana”, ahitana kaominina miisa 27 sy ny boriborintany miisa efatra eto an-dRenivohitra.Synèse R.L’article “Grand Tana”: hofanina hitantana fotodrafitrasa ireo eny ifotony a été récupéré chez Newsmada.
Fanambaran’ny fiadidiana ny Repbolika: lasa any ivelany hanatrika ny «confirmation» ny zanany ny filoha
Miova sata, miova andriana ary maneho ny fandalana ny mangarahara. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny sampandraharahan’ny Serasera sy ny fifandraisana ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika, omaly, amin’ny anton-dian’ny filoham-pirenena any ivelany.Nivoitra tamin’ny fanambarana ny filazana fa nanainga an-tanindrazana hanefa ny adidiny amin’ny fanatrehana ny “confirmation” an’ny zanany vavitokana ny filoha Rajoelina Andry. “Zava-dehibe loatra eo amin’ny fiainana tokoa mantsy izany ary indrindra, fitahiana sy fahasoavana lehibe avy amin’Andriamanitra”, hoy ny fanambarana. Notsiahivin’ny tompon’andraikitra tamin’izany fa ray sy loham-pianakaviana koa ny filoham-pirenena ary manana andraikitra eo anivon’ny ankohonany sy ny vady aman-janany, ankoatra ny maha filohan’ny Repoblika azy.Fomba fiasa vaovaoMidika izany fa nanova fomba fiasa ho amin’ny tsaratsara kokoa ny tompon’andraikitra vaovao eo anivon’ny sampandraharahan’ny Serasera sy ny fifandraisana ao an-dapa. Maneho sy mampahafantatra ny vaovao rehetra mba tsy ho tompon-trano mihono ny vahoaka malagasy, manoloana ny mpitondra azy. Efa fanao sy fahita any amin’ireo firenena sasany ny fomba fiasa tahaka izao amin’ny famoahana ny vaovao rehetra eo anivon’ny mpitantana ny firenena.Fitantanana mangaraharaTafiditra amin’ny fametrahana ny mangaraharaha eo amin’ny fitantana izany sady ialana amin’ny honohono sy ny tsaho koa.Sambany indray tato anatin’ny roa taona teo ho eo izao fivoahan’ny filoham-pirenena any ivelany izao na fivahinianana tsy ofisialy aza izany. Tsy mba nisy nanao tahaka izao koa ireo mpitondra sy mpitantana nifandimby.Synèse R. L’article Fanambaran’ny fiadidiana ny Repbolika: lasa any ivelany hanatrika ny «confirmation» ny zanany ny filoha a été récupéré chez Newsmada.
Tsy nidina ny vidim-bary na efa fararano aza: tafakatra 10 000 Ar ny menaka iray litatra
Akora tena nahitana fiakarana tsy tapaka tao anatin’ny volana maromaro ny menaka fihinana eny an-tsena. Samy nisondrotra avokoa na ireo amidy miaraka amin’ny tavoahangy na ireo mbola mila tavoahangy asiana azy (en vrac).8 500 Ar 10 000 Ar ny tavoahangy 1l iray raha tanamasoandro ny akora nanaovana azy ary 7 600 Ar ny menaka vita avy amin’ny soja. 7 000 Ar kosa ny menaka soja mbola tsy ao anaty tavoahangy vita voatra mialoha. Ireo mpikarakara sakafo masaka no maka betsaka ity sokajy faharoa ity fa lafo loatra ilay efa miaraka amin’ny tavoahangy. Vokatr’izay, nahitana fisondrotana ny sakafo mila menaka betsaka. Ny atody koa 600 Ar sy 650 Ar ny iray eny amin’ny mpaninjara fa tsy misy latsak’izay intsony. Amin’izao fotoana manakaiky ny fety izao, mety ho tafakatra 700 Ar ireo tena lehibe, hoy ny mpivarotra. Ny siramamy manodidina ny 3 000 Ar ny kilao eny amin’ny mpamongady fa maka tombony 200 Ar ka hatramin’ny 400 Ar ny mpaninjara ka tafiakatra 3 400 Ar ny kilao ho an’ny siramamy fotsy ary 3300 Ar ho an’ny mavokely.Ny vary tsy nidina latsaky ny 2 500 Ar ny kilao ho an’ny vary vokatra eto an-toerana na efa fararano fotoana mampiakatra ny vokatra aza izao. Misy tafakatra hatramin’ny 2 800 Ar ny vary tsy vaovao satria mitombo kokoa. Ny vary “luxe” nafarana 2700 Ar ny kilao. Nampitaraina ny mpanjifa koa ny vidin’ny voankazo, 4 000 Ar ny voasary mandarine iray kilao ary 5 000 Ar ny papay lehibe iray, 3 000 Ar ny paokanelina iray.Vonjy A. L’article Tsy nidina ny vidim-bary na efa fararano aza: tafakatra 10 000 Ar ny menaka iray litatra a été récupéré chez Newsmada.
Cisco Antananarivo Renivohitra: 30 325 ny isan’ny mpiadina amin’ny CEPE
30 325 ny isan’ny mpiadina amin’ny fanadinam-panjakana CEPE ho an’ny Cisco Antananarivo Renivohitra, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Cisco, Ramananantony Harilalaina, omaly. Nitombo ny isan’ny mpiadina raha mitaha ny tamin’ny herintaona. Nanomboka ny 26 mey ny fanaovana ny CEPE andrana ho an’ny Cisco ary fanadinana andrana faharoa ny notanterahina ny talata lasa teo miaraka amin’ny Zap enina. Latsaka ny vokatra ho an’ny andrana voalohany ary efa nanao fanarenana ny mpanabe. Ho fantatra amin’ity herinandro ity ny valin’ny andrana faharoa. Efa misy rahateo ny sampandraharaha misahana ny kalitaon’ny fampianarana manampy hanarina ny lesoka mialoha ny tena fanadinana ny 6 jolay. Efa miomana ny tomponandraikitra amin’ny fiatrehana ny fanadinana. Hamafisina avokoa ny fepetra efa nampiharina tamin’ny CEPE 2020 hiarovana ny mpiadina manoloana ny valanaretina Covid-19.Vonjy A. L’article Cisco Antananarivo Renivohitra: 30 325 ny isan’ny mpiadina amin’ny CEPE a été récupéré chez Newsmada.
Malnutrition : Les CRNM à multiplier
Outre les grands projets agricoles et la mise en place d’infrastructures d’eau et d’électricité dans le Sud de Madagascar, les problèmes d’insécurité alimentaire et de malnutrition, dans leur dimension de proximité, ont également été abordés par le président de la République Andry Rajoelina, lors de son discours à la nation, hier soir. Ainsi, la mise en place de Centres de Récupération Nutritionnelle et Médicale (CRNM) dans les zones les plus touchées qui ne disposent pas encore de ce type de structure, a été annoncée par le chef de l’Etat. Il s’agit d’infrastructures destinées notamment aux enfants présentant des signes graves de malnutrition. Dans ces CRNM, les enfants malnutris sont pris en charge médicalement et sont suivis de près jusqu’à ce qu’ils récupèrent au niveau pondéral et sur le plan de la santé. Faut-il rappeler que des centres de récupération nutritionnelle sont déjà opérationnels dans certaines zones – dans le Sud ou dans d’autres parties de l’île – où la malnutrition est particulièrement inquiétante. Toutefois, ces structures gagneraient à être renforcées, d’où certainement cette décision de mettre en place les nouveaux CRNM. Hanitra R. L’article Malnutrition : Les CRNM à multiplier est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Malnutrition : Les CRNM à multiplier a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Tsangambaton’ny faha-100 taona: vita ny « tribune » an’ny seminera zandriny eny Ambohipo
Noraisina vonjimaika. Ni­dina teny amin’ny kianjan’ny seminera zandriny eny Am­bo­hipo, ny arsevekan’Antanana­rivo, ny Mgr Razanakolona Odon sy ny filohan’ny fankalazana ny faha-100 taonan’ny seminera zandriny, Andriama­nanoro Augustin, afakomaly. Nijery ifotony ny fahavitan’ ny “Tribune” ho an’izao jobily izao izy ireo. Efa mamaramparana ny asa amin’ny fanaovana izany fotodrafitrasa izany ny orinasa nisahana ny fanamboarana azy. Nambaran’ny Tale jeneralin’ny tetika­san’ny filoham-pirenena ta­min’izany fa niainga tamin’ny hetahetan’ireo seminarista zandriny izao fananganana ny sehatra eo amin’ny kianja izao.Mbola hohatsarainaNiarahana amin’ireo mpi­ara-miombona antoka rehetra izany. “Io aloha ny bainga voavadika fa mbola ho avy ny fanatsarana bebe kokoa”, hoy izy. Nanteriny fa hamaha ny olana amin’ny fahamaroan’ny oloan tonga eny an-toerana rehefa fotoan-dehibe ny fahavitan’izao fotodrafitrasa izao. Nanamafy izany ny Mgr Razanakolona Odon, nilaza fa ilaina ny zavatra maharitra tahaka izao. Tsy mbola hotokanana anefa izany fa iandrasana ny fotoana avy amin’ny diosezy. “Fandraisana ny asa vita ara-teknika ny natao”, hoy izy. Mbola hisy ny fanarenana ny kianja amin’ny herinandro ary hojerena koa ny hanitarana ahazoana toerana maherin’ny 100 eo amin’ny “Podium” ankoatra ny efa vita.Synèse R.L’article Tsangambaton’ny faha-100 taona: vita ny « tribune » an’ny seminera zandriny eny Ambohipo a été récupéré chez Newsmada.
Ces responsables ont rassuré la population que la pénurie d’eau n’est pas à craindre pour la période d’étiage. Depuis quelques années, la Capitale et les communes périphériques subissent les conséquences de l’assèchement des rivières d’Ikopa et de Sisaony. Nous ne sommes pas encore en période d’étiage mais le niveau de ces rivières est pourtant au plus bas. Durant une rencontre avec la presse à Ambohijatovo, le directeur général du ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement (MEAH),Thierry Ratovoniaina, a tenu à rassurer que la situation est beaucoup moins critique par rapport à l’année dernière. « Des efforts sont déjà menés depuis l’année dernière pour l’identification des zones les plus critiques. Outre la construction des forages, il y avait également la mise en place de dix stations conteneurisées d’une capacité de 10m3 par heure chacune pour un renforcement additionnel de 2400m3 par jour », a-t-il rassuré. Selon toujours ce responsable, ces réalisations répondent aux besoins de la population et la situation de nombreuses zones qui ont été placées en alerte rouge l’année dernière a connu une nette amélioration. Par ailleurs, l’assèchement des rivières est loin d’être le fruit d’un hasard. La dégradation de l’environnement ainsi que le changement climatique y sont pour quelque chose. Dans ses perspectives, l’Autorité nationale de l’eau et de l’assainissement (ANDEA) prévoit ainsi de mettre en place des projets pérennes pour l’approvisionnement en eau potable pour la population. «Dans un premier temps, nous allons tout d’abord mettre en place un système de suivi en ressource en eau pour l’identification des failles mais également pour nous aider dans les prises de décisions. En parallèle, une enquête sera menée avec la Banque mondiale concernant les réservoirs d’eau. Des efforts seront également mobilisés pour la mise en place du système de stockage d’eau dans tout Madagascar pour qu’aucune localité ne soit oubliée» selon le directeur général de l’ANDEA, Antsatiana Ravaloera. Narindra Rakotobe L’article Hydrologie : La pénurie d’eau n’est pas à craindre pour Tana est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Hydrologie : La pénurie d’eau n’est pas à craindre pour Tana a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Olona roa tamin’ilay moto no namoy ny ainy teo no ho eo. Mpandeha 20 tao anatin’ilay taksiborosy Sprinter no voalaza fa naratra mafy, lehilahy roa maty. Ireo no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, nitranga, omaly maraina, tao Andakana, kaominina Andranolava, distrikan’i Marovoay (RN 4), omaly maraina.Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray ny lalam-pirenena fahefatra, omaly maraina tokony ho tamin’ny 06 ora. Tra-doza tamin’izany ny taksiborosy mampitohy an’Antsohihy sy Mahajanga teo amin’ny PK 525 +800 Berivotra, fokontany Anda­kalaka, kaominina ambani­votr’Antanambao-Andrano­lava, distrikan’i Marovoay. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tafakatra efatra ireo olona namoy ny ainy. Olona 15 hafa koa naratra mafy, ankoatra ireo, olona telo ihany koa mbola marary tsy mahatsiaro tena. «Nifampilahatra ny taksiborosy Sprinter roa hamonjy an’i Mahajanga, avy eo naka sisiny ny iray tamin’izy ireo, niala lavaka tamin’ny “dos d’âne” sady niditra fiholahana. Teo no nifanena tampoka tamina moto nanao taingin-telo avy any Mahajanga ny fiara», hoy ny fanazavan’ny brigade de la police routière (BPR). Mafy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta ka nivadibadika avy hatrany ny taksiborosy ary noraofiny niaraka taminy ilay moto. Samy tsy nisy tafajanona na ilay moto na ilay fiara fa nifatratra tany an-tokotanin’olona. Vokany, olona roa tamin’ireo nandeha moto no maty teo no ho eo voatsindrin’ny entana tao anaty tatatra dia ny zazalahy 8 taona sy ny rainy 41 taona.Naratra mafy Naratra mafy tamin’izany ny vehivavy iray, vadin’ilay lehilahy mpitondra moto sy ny renin’ilay ankizilahy namoy ny ainy. Maty tsy tra-drano ihany koa ny lehilahy roa 26 sy 34 taona, mpandeha tao anaty ny taksiborosy. Taorian’izay, tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina avy ao amin’ny faritra Boeny. Nalefa vonjimaiaka tao amin’ny hopitaly An­drova-Mahajanga avokoa ireo tra-doza. Olona 15 tao anatin’ilay taksiborosy no naratra mafy sy mbola manaraka fitsaboana ary olona telo hafa no mbola tsy mahatsiaro tena, hoy ny fanazavan’ny zandary. « Surveillante ao amin’ny CRINFP na Institut national de formation pédagogique ao Mahabibo ilay ramatoa nandeha moto », hoy hatrany ny loharanom-baovao. Nanao fanambarana ny governoran’ny faritra Boeny sy ny mpiara-miasa aminy rehetra fa maneho fiaraha-miory amin’irreo fianakavian’ireo namoy ny ainy. Ary mirary fahasitranana feno ho an’ireo maratra.Henintsoa HaniL’article Taksiborosy Sprinter niala moto- RN4: Olona 4 maty tsy tra-drano, mpandeha 20 naratra mafy a été récupéré chez Newsmada.
« Concert classique de midi »: hiaka-tsehatra ny tarika Tsimihole
Hiavaka tsy tahaka ny nahazatra hatramin’izay ny « Concert classique de midi » amin’ity indray mitoraka ity. Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny niverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena ny seho hotontosaina ny talata 22 jona izao manomboka amin’ny 1ora tsy diso, ao amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Ny tarika Tsimihole no hitondra ny talentany ho an’ny mpitia zavakanto amin’io fotoana io. Tarika mivoy ny mozika avy any atsimon’ny Nosy. Ahenoana ihany koa ny fihaonan’ny mozika malagasy sy ny mozika ankehitriny. Mamoitra ny zava-misy eny anivon’ny fiarahamonina, indrindra fa ny any atsimo, kosa ny tononkira.Marihina fa faha-118 amin’ny seho « Concert classique de midi » ity karakarain’ny Madagascar Mozarteum izay mandia ny faha-10 taony ity.HaRy RazafindrakotoL’article « Concert classique de midi »: hiaka-tsehatra ny tarika Tsimihole a été récupéré chez Newsmada.